Filtrer les éléments par date : jeudi, 24 octobre 2019
jeudi, 24 octobre 2019 21:23
Bakalôrea - Antananarivo: Hanomboka amin’ny 28 oktobra ny fitsarana taratasim-panadinana
Namoaka fanambarana, miantefa amin’ireo mpitsara fanadinana, ny tompon'andraikitra eo anivon’ny oniversiten’Antananarivo androany fa hanomboka amin’ny alatsinainy 28 oktobra 2019 ny fitsarana ireo taratasim-panadinana Bakalôrea, fihodinana faharoa manokana izay notanterahina nanomboka ny alarobia 23 oktobra ka hatramin’ny sabotsy 26 oktobra 2019.
jeudi, 24 octobre 2019 21:19
Tana Masoandro: Nankinina amin’ny APIPA ny fanaovana ny « expropriation »
Noraisina nandritra ny filankevitry ny governemanta androany ny famindrana fahefana sy fanondroana ny APIPA (Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d’Antananarivo) amin’ny fanatanterahana ny fakana ny tany « expropriation » hiorenan’ny tetikasa Tana Masoandro.
jeudi, 24 octobre 2019 21:05
Ampefy-Itasy: Hanorenana « Village culturel »
Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny governemanta androany ny hananganana « Village culturel », na vohitry ny kolontsaina ao Ampefy-Itasy.
jeudi, 24 octobre 2019 21:04
« Iles éparses »: Hajoro alohan' ny 18 novambra 2019 ny Vaomiera iombonana
Tamin’ny fihaonan’ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina, nandritra ny fitsidihana ofisialy nataon’ity farany tany Frantsa tamin’ny mey 2019 no voalazan’ny roa tonta fa hatsangana ny Vaomiera iombonana handinika ny momba ireo nosy manodidina (Iles éparses). Nampahatsiahy tamin’ny tambazotra sosialy i Andry Rajoelina androany fa « hajoro alohan' ny 18 novambra 2019 ny Vaomiera iombonana momba ireo nosy éparses ireo ».
Tao ihany koa no nanambarany fa « ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny fiarovana ny tombotsoantsika dia tsy maintsy takiana amin’ny alalan’ny fifampiresahana ».
jeudi, 24 octobre 2019 15:03
Ambalakidresy – Ambohimahasoa: Ramatoa iray maty notifirin’ny dahalo
Nitrangana fanafihana mitam-piadiana tao Ambatofolaka Kaominina Ambalakidresy, Distrika Ambohimahasoa ny 22 oktobra hifoha ny 23 oktobra 2019, tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Dahalo ampolony, mitam-basy no nanafika tokantrano iray.
Kojakojan-dakozia, akoho amam-borona maro no very nandritra izany. Maty notifirin’ny dahalo ny vehivavy iray tompon-trano. Nahitana taim-bala 7,62 mm miisa roa tavela teo amin’ny toerana nitrangan’ny fanafihana. Misokatra ny fanadihadiana sy fikarohana ireo olon-dratsy ataon’ny Zandary avy amin’ny Brigady Ambohimahasoa.
Antsirabe: Mikorontana ny famatsiana rano
Mihamafy ny fikorontanan’ny famatsiana rano eto an-tanàn’Antsirabe amin’izao fotoana izao, araka ny fampitam-baovaon’ny orinasa Jirama. Fokontany maromaro eto an-drenivohitr’i Vakinankaratra no voakasik’izany.
Fihenan'ny farihin'Andraikiba, ary ny loharano eny Marofangady, izay toerana misy ireo toby roa famokaran-dranon’ny JIRAMA Antsirabe noho ny main-tany no voalaza fa antony.
Milina fampakaran-drano roa amin’ireo efatra sisa no miasa ao Andraikiba, raha toa ka loharano iray amin'ireo telo eny Marofangady no azo ampiasaina ho amin’ny famokarana.
jeudi, 24 octobre 2019 14:42
KOPI-KOLE Rossy: Hotsenaina makotroka eto Fianarantsoa
Higadona eto Fianarantsoa amin’ny sabotsy 26 oktobra izao Ra-Tin, nivoaka mpandresy tamin’ny fifaninanana « KOPI-KOLE 2019 » nokarakarain’ny fahitalavitra tsy miankina TV Plus. « KOPI-KOLE Rossy » i Ra-Tin.
Hisy lanonana ho fandraisana azy hatao eo amin’ny Rex Tsianolondroa ny tolakandron’io Sabotsy io, hafanain’ny Tarika Rossy miaraka amin'ny Bampampa.
Bongolava: Olona 5 matin’ny pesta tao anatin’ny 3 volana
17 ny trangan’aretina voamarina fa pesta atoditarimo « bubonique » tao amin’ny Distrikan’i Tsiroanomandidy tao anatin’ny telo volana, teo anelanelan’ny 23 aogositra 2019 hatramin’ny 19 oktobra 2019. Namoy ny ainy ny 5 tamin’ireo.
Tao amin’ny Fokontany Marovotry, Kaominina Bemahatazana ny 16 tamin’ireo voa ireo, ka namoy ainy ny 4 tamin’ireo ny volana septambra lasa iny. Tao amin’ny Kaominina Marotampona ny tranga faha-17 izay namoy ny ainy ihany koa ny fiandohan’ity volana oktobra ity.
Natsangana ny vaomieran’ny fahamaizana ao Bongolava hidina hanara-maso, hanao fanentanana ara-pahasalamana ny mponina momba ny fahadiovana.
jeudi, 24 octobre 2019 12:18
Ambalanirana-Tsiroanomandidy: Basy telo tratra, olona telo voasambotra
Basy mahery vaika iray MAS 36, miaraka amin’ny bala 14, basy lava « calibre 12 » marika « BAIKAL » iray, ary basy lava tefy gasy iray no saron’ny Zandary avy ao amin’ny « Poste Avancé » Ambalanirana omaly alarobia 23 oktobra 2019 tao Beraketa Fokontany Fihaonana amin’io Kaominina Ambalanirana io, nandritra ny fisavana nataon’izy ireo tamin’ny trano iray tao an-toerana, araka ny loharanom-baovao azon’izy ireo. Olona roa, miampy ny tompon-trano nahitana ny basy no voasambotra niaraka tamin’ireo fitaovam-piadiana ireo. Mandeha ny fanadihadiana amin’izao.